Denni Uord - unozinti abasha Welsh, ongeyena unozinti esiyinhloko Wales, kodwa bangase babe esikhathini esizayo esiseduze. Kuze kube manje, yena yinhle abasebasha ngenxa yezindinganiso football, ikakhulukazi ngezindinganiso we onozinti ukuthi eziqhakaza ikakhulu ngemva kweminyaka engu-26, ngokungafani kuya abadlali ensimini, nokuvuthwa professional leyo kwenzeka ngaphambili. Denni Uord isikhathi eside ayikwazanga ukuthola umdlalo umkhuba, nakuba izikhathi ezingaphezu kwesisodwa kuye yaqashiswa.
Denni Uord wazalelwa June 22, 1993 eWales e Wrexham, ibhola umsebenzi wakhe ayiqala club efanayo. Ngezinye nane wahlanganyela football Academy "Wrexham" futhi kuze kube 2011 owadlalela amaqembu intsha abasemazingeni ahlukahlukene, ngaze ngaba inkontileka professional eneminyaka engu-18. Ngokushesha ngemva kwalokho, wayiswa ngenyanga rent kuleli qembu 'Tamworth', futhi ukukhuluma division wesihlanu isiNgisi, kodwa kukhona wabonakala enkundleni kanye kuphela. Ngemva kwalokho, cishe ngonyaka Lesigceme kwaba kwesokunxele "Wrexham", kodwa ngo-January 2012, ngoba izinkulungwane 125 euro ngokuzumayo atholwe omunye amakilabhu esiqine eNgilandi - "Liverpool".
Inguquko kuya "Liverpool" futhi aqashe
I "Liverpool" Denni Uord Yiqiniso, besingalindele ukuthi ngeke ngokushesha beka ngasesinqeni noma ebhentshini. Nokho, oneminyaka engu-18 ubudala, ngokushesha kwaba amakhophi club lapho eqala ukwenza ngokugcwele. Wathunyelelwa usocingweni iqembu abaphezulu, kodwa wahlala phezu kwebhentshi. Ikholi olandelayo waba kuphela ngo-2014, kodwa ke Lesigceme ayikwazanga ukwenza DEBUT kwakhe eqenjini lokuqala. Ngenxa yalokho, ngo-March 2015 unozinti osemncane yathunyelwa club English "Morecambe", kodwa bahlala khona kuphela ngenyanga, uvele kule nkantolo izikhathi ezinhlanu emkhakheni. Kuze kube sekupheleni kwesizini isiphindela ebhentshini double amasango ababeletha ukuthi won in the "Liverpool" Denni Uord. Unozinti, ngokwemvelo, wafuna ukufanisa umkhuba, ngakho ehlobo lika-2015 wayiswa izinyanga eziyisithupha iqashwe eScotland "Aberdeen", lapho wangena ensimini 29 imidlalo futhi yabonisa umdlalo eyizingqabavu kakhulu. Ingxenye isizini yesibili, uDanny wachitha in the "Liverpool", kodwa okuningi engabangela eqenjini lokuqala, futhi agcinwe midlalo emibili ngasesinqeni. Ehlobo lika-2016 Denni Uord, umdlali owaqala ukuba athuthuke kakhulu ngokushesha kunangaphambili, wathunyelwa irenti e "Huddersfield", ojamele Championship, okuyinto ngokushesha baba unozinti main, futhi okwamanje uye wabambelela kakade 12 okufanayo, ngobuhlungu kubo ingqikithi eziyishumi amakhanda.
Lapho esemusha, Lesigceme wachitha eziningi okufanayo amaqembu yentsha Wales ezigabeni ezehlukene ubudala. Ngokokuqala ngqá e iqembu omdala kazwelonke, wabizwa ngo-November 2014, kodwa ke wahlala ebhentshini, njengoba ezinsukwini ezizayo ukufana eziyisikhombisa. Kuphela ngoMashi 2016, Lesigceme wangena ikhefu umdlalo wobungani ngokumelene Northern Ireland bamelele Wayne Hennessey. Esikhathini umdlalo wokugcina ngaphambi 2016 ubuqhawe European, Lesigceme futhi sehla ebhentshini ngesikhathi isikhathi sokuphumula, kodwa umdlalo wokuqala Welsh ngqo European Championship Lesigceme seziqalile ukusetshenziswa kwakhe ukuqala uhlelo. Wayemkhumbula umgomo owodwa nje kusukela Slovaks, ukuze Welsh bakwazi ukunqoba 2: 1. Zonke ezinye ukufana kule midlalo Lesigceme wachitha ebhentshini.
Hugo Lloris: Biography of the French football player kanye unozinti, "Tottenham Hotspur"
Umdlali wasesiswini Russian Ivanov egor
"Iricar": yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa
Yezandla ngezandla zabo: indlela yokwenza inkomishi iphepha